Talyaaniga Oo si Kulul Uga Jawaabay Cambaarayn Uga Timid Madaxwaynaha Dalka Faransiiska. – Heemaal News Network
Raisul wasaariha dalka Taliyaaniga, Giuseppe Conte, ayaa jawaab kulul ka bixiyay eedeeyn uga timid madaxwaynaha Faransiiska Emmanuel Macron,
Macaron ayaa dhaleeceeyay taliyaaniga ka dib markii ay diideen in dalkoda uu ku soo xirto Markab siday muhaajiriin laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka.
Balse Mr Conte ayaa sheegay in Taliyaaniga uusan aqbali Karin casharo munaafuqnimo oo ka yimid dalal mar waliba door bidi jiray in ay dhabarka u jeediyaan soogalootiga.
Dad Badan Oo ku Dhintay Buundo Weyn Oo ku soo Duntay Magalada Genoa Dalka Talyaaniga.(Sawiro)
Buundo weyn ayaa ku soo duntay magaalada Genoa ee dalka Talyaaniga iyadoo ay ku dhinteen 22 ruux, ayna baabuur badan ku soo dhaceen meel u jirta dhulka boqol mitir. Wasiir ku xigeenka gaadiidka dalka Talyaaniga […]
Malta Oo Diiday In Uu Ku Soo Xidho Markab Siday Dad Muhaajiriin Ah
Dowladda Malta ayaa iska diidday inay qaabisho 234 muhaajiriin Afrikaan ah, kuwaasi oo Khamiistii laga soo badbaadiyey badda Mediterranean . Muhaajiriintan ayaa doon ka raacay dalka Liibiya, hase ahaatee markii ay bartamaha badda marayaan ayaa […]